Bayaanka Ilaah ee Jacaylka Noo, Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Masiixiyiin badan ayaa gebi ahaanba aan hubin oo ka welwelsan arrintaas, Ilaahay weli miyuu jecel yahay iyaga? Waxay ka walaacsan yihiin in Ilaah iyaga diidi karo, oo waxaa kasii daran inuu isagu iyaga diiday. Waxaa laga yaabaa inaad tahay isla cabsidaada. Maxaad ugu malaynaysaa inay Masiixiyiintu walaac qabaan? Jawaabtu waa si fudud inay iyagu naftooda daacad u yihiin. Waxay ogyihiin inay yihiin dambiilayaal. Waxay si xanuun leh uga warqabaan dhicitaankooda, khaladaadkooda, guuldarradooda - dembiyadooda. Waxaa la baray in jacaylka Ilaah iyo xitaa badbaadadiisa ay kuxirantahay sida wanaagsan ee ay Ilaahay u addeecaan. Markaa waxay Ilaah u sii sheegaan sida ay uga xun yihiin oo ay u baryayaan cafis, iyagoo rajeynaya in Ilaah iyaga cafiyo oo uusan jeedsan dhabarkooda haddii ay si uun u soo saaraan dareen qoto-dheer oo gudaha ah.
Waxay i xasuusineysaa Hamlet, oo ah ciyaar Shakespeare ah. Sheekadan, Amiir Hamlet wuxuu ku bartay in adeerkiis Klaudius uu dilay Hamlet aabihii uuna guursaday hooyadiis si uu xukunka u qabto. Sidaa darteed, Hamlet si qarsoodi ah ayuu qorsheynayaa inuu ku dilo adeerkiis / adeerkiis ficil aargudasho ah. Fursadda ugu fiican ayaa soo baxday, laakiin boqorka ayaa tukanaya, sidaa darteed Hamlet dib u dhigeysaa weerarka. Haddii aan dilo inta uu qiranayo, jannada ayuu aadi doonaa, ayuu Hamlet ku soo gabagabeeyey. Haddii aan sugo oo dilo isaga ka dib markuu mar labaad dembaabay, laakiin ka hor intuusan ogaanin taas, wuxuu tegi doonaa cadaabta. Dad badani waxay wadaagaan fikradaha Hamlet ee ku saabsan Ilaah iyo dembiga aadanaha.
Markay rumaysteen, waxaa loo sheegay in haddii iyo ilaa ay toobad keenaan oo ay rumaystaan, inay iyagu gebi ahaanba ka soocnaan doonaan Ilaah isla markaana dhiigga Masiix uusan iyaga u shaqeyn doonin. Rumaynta khaladkan ayaa iyaga ku hoggaamisay inay sameeyaan qalad kale: mar kasta oo ay ku soo noqdaan dembiga, Ilaah ayaa ka xayuubiyey nimcadooda iyo dhiiggii Masiixa mar dambe ma dabooli doono. Tani waa sababta sababta - marka dadku ay daacad ka yihiin dembigooda - ay isweydiiyaan noloshooda Masiixiga oo dhan haddii Ilaah diiday iyo in kale. Midkoodna tani waa war wanaagsan. Laakiin injiilku waa war wanaagsan. Injiilku nooguma sheegayo inaan ka go'nay xagga Ilaah oo ay tahay inaan wax qabanno si uu Ilaahay noogu deeqo nimcadiisa. Injiilku wuxuu noo sheegayaa in Ilaaha Aabbaha ah ee Masiixa ku jira wax walbo oo aad ka mid tahay adiga iyo adiguba ay ku jirto dadka oo dhan (Kolosay 1,19, 20) dib u heshiisiin.
Ma jiro wax carqalad ah, ama kala fogeyn ma jiro nin iyo Ilaah, maxaa yeelay Ciise wuu dumiyey isaga iyo asaga qudhiisa, wuxuu u jiiday aadanaha jacaylka Aabaha. (1 Yooxanaa 2,1; Yooxanaa 12,32). Caqabada kaliya ayaa ah mala awaal (Kolosay 1,21) taas oo ah inaannu bini aadamku ku dhisnay iskaashikeenna, cabsi iyo madax-bannaani. Injiilku maaha mid ku saabsan sameynta ama rumaynta shay sababaya inuu Eebbe ka beddelo xaaladdeena kan aan jeclayn ee uu jecel yahay.
Jacaylka Eebbe kuma xirna wax kasta oo aan qabanno ama ayan qaban. Injiilku waa sharraxaad wixii hore u run ahaa - sharraxaad ku saabsan jacaylka aabihiis ee aan dhammaanayn ee aadanaha oo dhan, kaas oo lagu muujiyey Ciise Masiix Ruuxa Quduuska ah. Ilaah wuu ku jeclaa ka hor intaadan waligaa qoomameyn ama aamminin wax, iyo wax aadan adigu ama qof kale sameyn doonin oo taas beddeli doona (Rooma 5,8; 8,31-39).
Injiilku wuxuu ku saabsan yahay xiriir, cilaaqaad lala yeesho Ilaah kaas oo run inoo noqday annaga oo adeegsanaya ficillada Ilaahay ee Masiixa. Maahan shuruudo dhawr ah, mana ahan mala awaal caqli gal ah oo dhowr ah xaqiiqooyin diimeed ama mid kitaabi ah. Ciise Masiix oo keliya nama taagna oo kursiga xukumaadda ee Ilaah; Isagu wuu na dhex geliyey isaga, oo isagaa inagula sameeyey isaga iyo isaga xagga Ruuxa Quduuska ah carruurtiisii ​​Ilaah jeclaaday.
Ma aha Ciise, Badbaadiyeheenna, kii qaatay dembiyadeenna oo dhan, kan Ruuxa Quduuska ahu inagu dhex shaqeeyaa oo sameeyo oo ku dhammaystiro siduu doonayo. (Filiboy 4,13:2,8; Efesos 10). Waxaan nafteena u dhiibi karnaa qalbigeenna oo dhan si aan isaga u raacno, annagoo og inaan haddii aan ku guul darreysanno uu cafin doono. Ka fikir! Eebbe ma aha ilaah ina ilaaliya jannada dhexdeeda, laakiin waa Aabbaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah oo aad ku dhex nooshahay, ku duubto oo aad ku nooshahay (Falimaha Rasuullada 17,28). Isagu aad buu kuu jecel yahay, iyadoo aan loo eegeyn cidda aad tahay ama waxaad ku kacday, in Masiixa oo ah Wiilka Ilaah, kii galay jidhka bini-aadamka - oo uu ku dhex galay jidhkeenna xagga Ruuxa Quduuska ah - shisheeyahaaga, iyo cabsidaada, Dembiyadaadii waa lagaa qaaday, oo waxaad ku bogsiisay nimcadiisa badbaadinta ah. Wuxuu ka saaray caqabad kasta oo idinka dhexeysa isaga iyo isaga.
Masiixa dhexdiisa waxaad ka tirtireysaa wax walboo kaa horjoogsada inaad la kulanto farxadda iyo daganaanshaha ka timaada inaad ku noolaatid is wehelnimo, saaxiibtinimo iyo kaamilnimo jacayl ah. Waa farriin cajiib ah oo Eebbe ina siiyay si aan ula wadaagno dadka kale!